अर्थ मन्त्रालयकाकारण मैले छात्रवृत्ति गुमाउनु पर्ने?
तै पनि उनले दिन नसकिने बताए।
अर्थ मन्त्रालयले एउटा नागरिकको उज्वल भविष्यका लागि एउटा अनापत्ति पत्र दिनै नमिल्ने हो र? नमिल्ने हो भने चीन सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै पत्र किन माग्थ्यो होला? विद्यार्थीलाइै अवसरबाट बञ्चित गराउने कुन कानुन हो यो? मिल्दैनमिल्ने भए पहिलो पटकमै जानकारी दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २८, २०७३ १५:३३:४०